အချစ်ဆိုသည်မှာ အုန်းရည်ပမာ | Ta Pwint Pan
December 4, 2011	By kokyawzin	အချစ်ဟာ အုန်းရည်နဲ့ တူပါတယ်။ အုန်းရည်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ စတည်ဖြစ်လာသလဲဆိုတာ မမြင်နိုင် မသိနိုင်သလို အချစ်ကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျသွားတာနဲ့ အုန်းသီးကို ခွဲပြီး တူညီပုံ တူညီချက်ကလေးကို ပြောပါဦးမယ်။
နုနယ်သော အုန်းသီး ။ ။
အပင်ပေါ်မှာ စိမ်းနေတဲ့ အုန်းသီးစိမ်းသေးသေးလေး သူ့မှာအရည်ရှိတယ်ထားဦး။ အဲဒီအရည်က အရသာရှိပါ့မလား။ ဓါးနဲ့ ခွဲလိုက်မယ် ဆိုရင်လည်း သိပ်မခွဲလိုက်ပါဘူး။ ဖန်နေမှာပေါ့။ နောက်ပြီး အထဲက အုန်းဆံကရော ပါးပါးနည်းနည်းလေးခနလေးစားလိုက်တာနဲ့ ကုန်သွားမှာ။
ငယ်ရွယ်သောသူ ။ ။
မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့မလွတ်သေးတဲ့အရွယ်ငယ်ငယ် သူ့မှာအချစ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီအရွယ်မှာထားတဲ့အချစ်က ရေရှည်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ တာရှည်တည်မြဲနိုင်ပါ့မလား။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့သူတွေဆိုတော့ တင့်တင့်တယ်တယ်ရှိပါ့မလား။ ဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မြန်ချနိုင်သူတွေ ဖြစ်လို့ ဒုက္ခဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
အလတ်စား အုန်းသီး ။ ။
သူကတော့ စိမ်းဝါရောင်အဆင်းနဲ့ သိပ်ကို တင့်တယ်တာပေါ့။ သူ့ကို ချွေပြီး ဓါးနဲ့ခွဲမယ်ဆိုလည်း လှလှလေးနဲ့ သေသေသပ်သပ်လေး ခွဲပေးရတယ်။ ဒါမှ လှပထဲ အခွံမာအုန်းသီးလေး ရမှာပေါ့။ နောက်ပြီး အုန်းရည်လေးကလည်း မွေးမှမွေး ချိုမှချို ။ အုန်းသီးဆံကလည်း စိမ့်မှစိမ့်။
အရွယ်အလတ်ပိုင်းရှိသောသူ ။ ။
မိဘအုပ်ထိန်းသူနဲ့ လွတ်သလို မလွတ်သလို အရွယ်ပါပဲ။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရွယ်ဆိုပါတော့။ ဒီအရွယ်မှ အိမ်ထောင်ကျခြင်းဟာ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်မှုကို နိုင်နင်းသူတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ အဲလို ပိုင်နိုင်တဲ့အတွက် အချစ်ဖြင့် အရင်းတည်သော မေတ္တာတရားသည် ပျော်ရွှင်မှုဖြင့် အစပြုကာ တည်မြဲစွာလျှောက် လှမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ရင့်မှည့်သော အုန်းသီး ။ ။
အုန်းသီးအခွံကိုက ရှုံ့နေပြီလေ။ ဓါးနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်တောင် ထုံတုံတုံနဲ့။ ခွဲရတာ ခက်လိုက်တာ။ ခွဲလို့ရရင်လည်း ဒီအုန်းသီးက အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ အုန်းရည်ကလည်း အုန်းဆီအနံ့ထွက်နေပြီ။ အုန်းသီးဆံကလည်း အုန်းဆီတွေ စမ်းထားသလို စားလို့မကောင်းတော့ဘူး။
အရွယ်လွန်သောသူ ။ ။
သူကတော့ အချစ်ဆိုတာကို တော်တော်စဉ်းစားနေရပြီ။ သူ့အတွက် အချစ်က အဓိကတောင် မဟုတ်တော့သလိုပဲ။ ဒီတော့ ဒီအရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ကျဖို့ သိပ်ခက်သွားပြီလေ။ အိမ်ထောင်ကျမယ်ဆိုရင်တောင် မတူညီတဲ့အခြေအနေကြောင့် ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ သံသယစိတ်တွေကြောင့် သာယာပျော်ရွှင်သော တည်မြဲစေချင်သော အိမ်ထောင်ရေးသည်လည်း ပြိုကွဲဖို့ပင် ရှိလေသည်။
ထို့ကြောင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သင့်သော အချိန်ကျလင့်ပြီဆိုပါက ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ အချိန်တန်ပေပြီ။
This entry was posted in အတွေး ကဗျာ-စာစု. Bookmark the permalink.
← အနီကဒ် ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုအစ	အချစ်ဟာ ခါး ခါး ခါး… →